धर्मनिरपेक्षताको घाँटी रेटिएका संबिधानका धारा र मुलुकी अपराध संहिताका दफाहरु : - MONGOL KHABAR
धर्मनिरपेक्षताको घाँटी रेटिएका संबिधानका धारा र मुलुकी अपराध संहिताका दफाहरु :
काठमाडौ । एकातिर गाईगोरुलाई 'राष्ट्रिय जनावर' बनाइएको छ र अर्को तिर गैर हिन्दुहरुलाई 'अराष्ट्रीय जनावर' बनाइएको त छँदैछ । एकल हिन्दुबादी राज्यसत्ता र तिनका मतियारहरुले न गाई गोरुको संरक्षण आफै गर्न सकिरहेका छन न त हाम्रो सस्कृतिको अभ्यास गर्न नै दिएका छन । यहि सन्दर्भमा संक्षिप्त र मुख्य कानुनी ब्याबस्थाबारे मेरो ब्यक्तिगत चिन्तन यस्तो छ ।
A🔺नेपालको संबिधान 2072 को 'भाग-1 प्रारम्भिक' को धारा-4 को उपधारा ( 1 ) मा 'धर्मनिरपेक्ष' राज्य हो भनिए पनि सोही उपधाराको स्पष्टीकरण : मा 'धर्मनिरपेक्ष' भन्नाले सनातन देखि चलीआएको धर्म सस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सास्कृतिक, स्वतन्त्रता सम्झ्नु पर्छ भन्दै तुरुन्तै 'धर्मनिरपेक्षता' को घाँटी रेट्दै हिन्दुधर्म र यसैको अबयब प्रबर्द्धन गर्ने काम भएको छ । धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता नितान्त भिन्न कुरा हुन । धर्मनिरपेक्षतामा सबै धार्मिक सम्प्रदायले आ-आफ्नो आस्था अनुसारको धर्म सस्कृतिको निर्बाध अभ्यास गर्न सक्छन भने राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन । 'धार्मिक स्वतन्त्रता' नियण्त्रीत हुन्छ । अहिले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ । जस्तो नेपाली इसाईहरुले चर्चमा गएर प्रार्थना त गर्न पाउछन । एकापसमा जैमसि ( जय मसिह ) त भन्न पाउँछन् । तर, इसाई इतरको घरमा झुक्किएर बाइबल लिएर छिर्यो भने 'धर्म सम्बन्धी कसुर' गरेको आरोपमा5बर्ष जेल देखिन थप 50 हजार जरिवानासम्म तिर्नुपर्ने अबस्था छ । राईलिम्बुले ढोल र च्याब्रुङ जति ठट्टाए पनि भो, टुँडिखेल त के सैनिक मंचको अगाडिको जम्मै झार मर्नेगरी साकेला नाचे पनि भो । तर, त्यही अबसरमा पित्री बुझाउनु पर्ने प्रचलन रहेका राईलिम्बुले गाईगोरु काटेर पित्री गाईगोरु काटमार गरे3बर्षसम्म जेल सजायँ हुन्छ । यसरी धार्मिक स्वतन्त्रता नियन्त्रीत हुन्छ, अर्थात सबै धार्मिक समुदायलाई निश्चित गतिबिधी गर्ने मात्र छुट हुन्छ भने यस्तो स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा राज्य प्रत्यक्ष र प्रणालीगत रुपमै एक विशेष धर्मको उन्नयनको लागि प्रत्यक्ष सरिक हुन्छ । अर्को शब्दमा राज्यको आफ्नो धर्म हुन्छ ।
स्मरण रहोस, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशीत 'नेपाली बृहत् शब्दकोश' ले सनातन धर्मको व्याख्या र अर्थ यसरी स्पष्ट पारेको छ : 1. आर्यहरुमा प्राचीन समयदेखि चली आएको मानविय धर्म । 2. बेद, पुरान, तन्त्र, मुर्तिपुजा आदिद्वारा समर्थित अचेल चलेको हिन्दु धर्म ।
B🔺 संबिधानको धारा4उपधारा ( 1 ) को स्पष्टीकरणलाई अर्थात 'सनातन देखि चली आएको धर्म सस्कृती' अर्थात हिन्दु धर्म र यसको अबयबहरुको प्रबर्द्धन गर्न संबिधानको भाग 1 कै धारा9को उपधारा (3) मा 'राष्ट्रिय जनवार गाई' तय गरिएको छ ।
C🔺 मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 27 ( पशुपंक्षी सम्बन्धी कसुर ) को दफा 289 को गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुने शिर्षकमा ( 1 ) (2) (3) (4) उपदफाहरु छन । उपदफा ( 1 ) ले गाई गोरुलाई मार्न र चोट पुर्याउन नहुने निर्देश गर्छ भने उपदफा (2) ले उपदफा ( 1 ) मा उल्लेख भएझै कसैले काटी वा कुटि मारेमा तिनबर्षसम्म कैद हुने ब्याबस्था गरेको छ । यस्तै उपदफा (3) मा गाईगोरुलाई कुटि अंगभंग पारेमा6महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्याएमा 50 हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने ब्याबस्था गरेको छ ।